25 Mishonga Inowanikwa Izvozvo Zvakachinja Upenyu Hwedu
Mishonga yave iripo kwenguva yakareba, uye hazvigoneki kuti munhu achakwanisa kufungidzira upenyu husina ivo nhasi. Gore roga roga, mushonga nemishonga zviri kuvandudzwa.
Kune mishonga mitsva iyo inozarura nhamba huru yezvimwe zvakasiyana. Zvechokwadi, kusvikira zvino pane zvirwere zvakadaro, mishonga isina kumbove yakagadzirwa. Asi zvingani izvo zvinokosha zvigadzirwa zvinoita kuti upenyu hwedu huve nyore!
Ichokwadi, haisi mushonga, asi upenyu huri nyore nyore kune vanachiremba. Mishonga yakawanda inorwadza zvikuru, uye dzimwe nguva varwere vanofanira kuitora nejamu kana uchi. Iyo inoputika yeveputipu ye capsule inogona kuvhara zvese kukanganisa kwemishonga uye inoita kuti kurapa kusanyanya kufadza.
Nhasi, vanachiremba vanovhiya havachishandisi aether, asi pane imwe nguva yakabatsira kuita zvakakosha mukurapa.
Vanhu vanotambura nekucherechedza kusakwana kwekusagadzikana kwepfungwa zvakaoma kuchinja munharaunda. Ritalin anovabatsira kudzora manzwiro avo nekuisa pfungwa.
Zvinoshamisa kuona munyaya iyi "Viagra", asi zvechokwadi imishonga inoshamisa. Zvose nokuti nhamba yakakura yevarume inotambura nehutachiona hwehutachiona, asi hukama hwepedyo hwakakosha zvikuru hutano hwevanhu.
Kune rumwe rutivi, izvi zvakagadzirwa zvinobatsira - mushonga unobatsira kutsungirira kurwadziwa kwakanyanya kwe makumi ezviuru zvevanhu. Kune rumwe rutivi, vamwe varwere, vakapindwa muropa kune opiates, vanova mishonga uye havagoni kufungidzira upenyu pasina Morphine.
Mushonga wacho wakagadzirwa muna 1951 uye kubvira ipapo wakabatsira kubata zvirwere zvakakomba zvepfungwa - zvakadai schizophrenia.
7. Zvimwe zvechemotherapy
Chemotherapy yakagadzirwa panguva yeHondo Yenyika Yechipiri, apo yakawanikwa kuti zvigadzirwa zve bis-β-chloroethylamine zvinogona kurarama nemarimia. Kubva panguva iyo, vatsvakurudzi vakagadzira mapoka emakemikarirapeutic, anosanganisira kushandiswa kwemishonga yakawanda panguva imwe chete.
Icho chimiro che steroid hormone inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana: arthritis, chirwere chetachiona, chirwere cheAdisonison nevamwe vazhinji.
Muna 1910, chirwere chaive chirwere chakajairika uye chaifungidzirwa chisingaregi. Asi Pauro Ehrlich akakwanisa kuwana yakanakisisa yekurapa chirongwa - achishandisa Salvarsan.
10. Kurara mapiritsi
Kurara kunokosha zvikuru kune utano uye hukama. Maiwe, havasi vose vanogona kurara zvakanaka. Kune vanhu vanotambura nekushaya hope. Kuti ivo vavete ndeye dambudziko rechokwadi, uye chete mapiritsi akarara anovabatsira kuti vapezve simba.
Imwe yemishonga inoshanda zvikuru inoshandiswa kurapa chirwere chePalinson.
12. HIV protease inhibitors
Vanodzivisa protease zvirongwa uye kudzivirira kuwedzera kweva HIV masero.
13. Kuderedza mapiritsi
Zvipembenene zvakasiyana-siyana zvakashandiswa kwenguva refu. Asi mapiritsi achiri kuonekwa seimwe yenzira dzakanakisisa uye dzakanakisisa dzekudzivirira kubata pamuviri.
Chirwere chekare chinoshandiswa kuchengetedza mwoyo. Aspirin inoshandiswawo senhengo yeanticancer. Asi chaizvoizvo, nhoroondo yaro yakatanga nguva refu tisati tadzidza kuchipatara. Kunyange vaIjipita vekare vakacherechedza kuti dzimwe mbeu - ine salicylic acid - anobatsira nefivha uye musoro.
Kuiswa kune vamwe vanhu ndiyo nzira chete yokurarama nayo. Kuti nhengo dzomupiro dzave dzakambojaira mushure mekushanda, kune varwere vanoronga kugadzirira uku. Inobatsira zvishomanana kudzivirira masimba ezvirwere uye "kufara" kuzosangana nekuchinja.
Vanhu vane chirwere chekuzvidya mwoyo, PTSD kana kuora mwoyo kazhinji vanotora mishonga iyi. Pamusana pemigumisiro yeuropi inotanga kuti mushonga unobatsira varwere kuti vave vakanyanyisa.
Yakaratidzwa kune varwere vane dialysis. Varwere vatsvo havaiti erythropoietin. Mishonga inobatsira kuzadzisa huwandu hwehomoni iyi uye inodzivisa kukura kwehutachiona hwemaperembudzi.
Zviri nani kuzivikanwa seRetrovir. Mushonga unoshanda pamwe chete neprotease inhibitors uye unobatsira kudzora kubereka kweAIDS masero. Mukuwedzera, AZT haibvumi kutapurirwa kwehutachiona kubva kuna amai vane utachiona kuenda kumwana panguva yekuzvimba uye panguva yekuberekwa.
Inonziwo Furosemide. Iyi mishonga iri pane urongwa hwemishonga inokosha inozivikanwa neWorld Health Organisation uye inoshandiswa kurapa varwere vane kukwirira kweropa, mwoyo kusagadzikana, tsvete kana chirwere chechiropa.
Mune vanhu vane cholesterol yakakwirira uye triglycerides, kurwisa kwemwoyo kunogona kuitika nekukwanisa kukuru. "Lipitor" inobatsira kuita zvishoma nezvishoma zvinhu zvinokuvadza uye kuderedza dambudziko rekurwadziwa kwepfungwa.
Akashandisa kurapa herpes virus. Iyi ndiyo yekutanga mushonga wemishonga inobvumidzwa neWorld Health Ministry. Mushure mekuonekwa kwake, masayendisiti uye vanachiremba vakatanga kushingaira kuumba mishonga yezvirwere zvakadai sefenza kana hepatitis.
Asati aitwa, varwere vane chirwere cheshuga chemhando 1 vaifanira kutevera kudya kwakasimba, uye vairarama nevanorwara vasati vasvika mwedzi. Iye zvino "Insulin" haingobatsiri kupedza hupenyu hwevarwere, asiwo inovandudza hutano hwayo.
Chimiro chekugadzirira chave chakashandiswa kurapa mwoyo kusakwanisa uye arrhythmia. Zvinosuruvarisa, nemhaka yemigumisiro yakaipa, kushandiswa kwayo kwaifanira kumira.
Anobata zvirwere zvakadaro se rheumatoid arthritis, chirwere cheCrohn. Inoshandiswawo kurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana zvemadermatological. Nheyo ye "Humira" iri nyore - mishonga inodzivirira mapuroteni, nekuda kweizvi zvinotyisa zvinokura.
An antibiotic yakakwanisa kukurira zvakasimba zvirwere zvinotyisa. Mushure mokunge kuwanikwa kwePenicillin, nyanzvi dzakanyatsopinda mukutsvakurudza uye kukura kwevamwe antibacterial agents.
65 anonyanya kukurudzira tattoo pfungwa pamusoro pechiuno
Kuisa zvinhu kana kutarisa se 2 nhovo dzesilicone
21 dambudziko rinotarisana nemasikirwo ezvisikwa
15 funny photos of vatungamiri venyika vane mafashoni emafashoni
Kutsanya, izvo zvinokuita kuti iwe urove meno ako zvakare uye pakarepo!
15 nyaya dzakasiyana-siyana mukurapa, iyo inogona kunzi chishamiso
14 zvakavanzika zvevaya vanorota kubva kune chiwuru vachienda kumarara
Simba remishonga: mienzaniso 12 inotyisa yemigumisiro yemishonga pamuviri womunhu
10 zvirwere zvisingakwanisi kurapwa
Kutambudzika kwechikadzi: mapuranga makumi maviri nemashanu, ayo achaunza misodzi chero musikana!
25 nzira dzekunakidza bvudzi rakapoteredza
20 mapenzi varume vanobva kumakwikwi "The World Beard and Mustache Championships"
Mufambi wekugadzirira anoita maitiro muhutano hwekufungidzira, kubva kwauri iwe unonzwa uchinetseka!
Ecuador - chii chaungaona?
Hove yehove ine maorivhi machena
Dill - kudyara uye kutarisira
Nzira yekuziva sei nguva yekati?
Makore eimba yekurara
Doorway pasina musuo
Chii chinoitika kuremera hwaAllina Jolie?
Nzira yekubvisa sei mukomana kuitira kuti asagumburwa?
Nzira yekuisa sei tira muimba yekugezera?
Mutori wenhau Kate Hudson akapfeka mutsvuku, uye akafungidzirwa chifukidziro chaMaria Claire
Acute cystitis - zviratidzo
Nguva dzose kusanganiswa kwemasese pasina kufanana kunowanzokonzera
Inguva yakadini kugara pasi twine?
Bezel-hat inoshandiswa kune vakadzi vakanaka
Zvokudya zvakasvibira kubva mumiriwo
Chii chaunofanira kuita paSvondo Yakachena - zviratidzo